Ny Fomba Fandrakofana Fifidianana Miaraka Amin’ny Media Sosialy… Tsy Misy Aterineto · Global Voices teny Malagasy
Ny Fomba Fandrakofana Fifidianana Miaraka Amin'ny Media Sosialy… Tsy Misy Aterineto
Voadika ny 05 Jona 2013 21:20 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Português, 日本語, English
Ny fitaterana ity lahatsoratra ity dia avy amin'ny mpikambana anatin'ny GV, Kofi Yeboah
Ny “Ghana Decides” dia tetikasa iray ety anaty aterineto izay nikendry ny handrakotra ny fizotra nankany amin'ilay fifidianana filoham-pirenena tamin'ny 2012, nanantena ny “hampiroborobo maimaim-poana ny fanomezam-pahalalana tsara ho an'ireo mpifidy, mba hisian'ny fifidianana marina sy azo antoka,” amin'ny alalan'ny fampiasana media sosialy ao anaty aterineto ho fitaovana voalohany enti-miasa. Hetsiky ny Blogging Ghana izy io, nanangana zavatra mivaingana izy teo anivon'ity vondrom-piarahamonin'ireo mpampiasa media sosialy ity sy ireo liana amin'izany ao anatiny sy ivelan'ny firenena. Nifarana ny Janoary 2013 io tetikasa io, taorian'ny nahavitan'ny fifidianana.
Nanoratra tao amin'ny bilaogy ny tonian-dahatsoratr'io tetikasa io, Nana Yaw, taorian'ny nifaranan'ilay tetikasa
Fony nanomboka izahay, iray ihany ny tanjonay dia ny fanomezana antoka fa hiditra anatin'ny media sosialy ny tenin'ireo teratany Ghaneana izay nalentiky ny media tranainy sy notsatsoiny, ary nitombo dia nitombo hany ka tsy afaka nomen'ireo media sy mpanao politika lamosina intsony. Faly izahay na izany fotsiny aza no vita.
Fisoloana vava ety anaty Aterineto, tsy misy Aterineto
Matetika ny Ghana Decides nomiatrika asa henjana amin'ny fisoloana vava ao anaty aterineto anatinà firenena izay manana fandrakofana aterineto tena mihisatra be, sady miasa anatinà toerana ambanivohitra tsy misy fandrakofana mba hamoahana ireo fanavaozam-baovao. Na eo aza izany, vitan'izy ireo ny namadika izany ho tombotsoany. Milaza izy ireo:
“Izao no paikadinay tamin'izany: ireo vondrona tsy ao anaty aterineto no mpahazo tombotsoa tamin'io tetikasa io ary ny vondrom-piarahamonina ao anaty aterineto no mpijery mpanaraka ny tetikasa.”
Nidina nijery maso ireo vondrom-piarahamonina tsy misy aterineto anatin'ny faritra sivy amin'ireo folo ao Ghana ny Ghana Decides – matetika ny sain'izy ireo dia mifantoka amin'ireo vondrona nahiliky ny fiarahamonina, ireo vehivavy, sy ny tanora. Amin'ny alalan'ny fiadian-kevitra mikasika ny olana mahazo ireo vondrona ireo sy ny fanangonam-baovao, haheno ny vokatra avy amin'ireo fihaonana tsy mivantana miaraka aminà vahoaka mpampiasa aterineto hatrany lavitra any izy ireo aoriana kelin'izay, vantany vao miverina ny fahafahana miditra aterineto. Namela ny ekipan'ny Ghana Decides hiasa sy hampitatra ny sehatr'ireo olana iadian-kevitra ao anaty aterineto, amin'ny fanomezana feo ho an'ireo vondrom-piarahamonina sasany izay tsy ny ao anaty aterineto ihany no sedra hatrehany – manampy amin'ny fandokoana endrika feno, mampandray anjara bebe kokoa an'i Ghana sy ireo fanambiny ao anaty aterineto.
Nanana paikady maro ny Ghana Decides hanandratana ny hetsi-panentanany. Milaza izy ireo fa nibahana be teo amin'ny fahalavorarian'ny asan'izy ireo ny fahazoany fanohanana avy amin'ilay vondrom-piarahamonina misy ao anaty aterineto – indrindra ny vahoaka tanora. Nampiasa paikady famoahana hetsika mikasika ny zava-baovao ihany koa izy ireo mba hiasàna enti-manohitra ny fihazohazoana ary mba hampandraisana anjara ireo olom-pirenena (tahaka ny tamin'ny nahalasanan'ny Filoha Mills).
Milaza io vondrona io,
“Ny fahalavorarian'ny Ghana Decides dia hita voalohany indrindra anatin'ny fampisehoana fa misy vahoaka Ghaneana ao anaty aterineto izay manairy ny hirotsaka anatin'ireo olana mifandray amin'ny demokrasia sy ny fiainana sosialy sy toekarena. Izany, mazava ho azy, dia tsy zava-miafina amintsika izay mafàna fo aty anaty aterineto! Nefa goavana sy manan-danja ny fampisehoana izany an'ny fiaraha-monina sivily, ny media tranainy, sy ireo mpitondra ara-politika.”
Nifantoka tamin'ny famoronana fiaraha-miasa miaraka amin'ireo fikambanana Ghaneana hafa miasa ho an'ireo vondrom-piarahamonina tsy misy mpihaino ihany koa ny Ghana Decides, ary nanofana ny maro tamin'ny fampiasana ny media sosialy ho an'ireo asa mifandray amin'ny fifidianana. Misy vitsivitsy amin'ireo mpiara-miasa aminy ireo, tahaka ny Voice Ghana – miasa miaraka amin'ireo olona manana kilema – no sambany mba tafiditra voalohany indrindra ao anaty aterineto .
Milaza izy ireo, “Araka ny fahitana ny hantsana misy eo amin'ny fidirana aterineto sy ny fahalalana ny media sosialy, vao ny morony fotsiny no nosafosafoinay.” Nefa, notsindrin'izy ireo, mampirisika ireo vokatra azo.
Raha te hahafantatra bebe kokoa momba ny asan'ny Ghana Decides, afaka mahita lahatsary maro be ao amin'ny youtube ianao, isan'izany ity lahatsarin'ny asan'izy ireo “ambadiky ny sehatra” ity.
Mbola mamoaka fampahalalana mikasika ny asany ao amin'ny Facebook hatrany ny ekipan'ny Ghana Decides ary vao haingana izay dia nomena fanampiana momba ny fanavaozana/fitondràna zava-baovao avy amin'ny Minisitry ny Varotra Ghaneana izy ireo, izay nahatsapa ny akon'ny asany.
Sary ao ao amin'ny vohikala sy pejy Facebook-n'ny Ghana Decides.